Soo dejisan foobar2000 1.3.12 – Vessoft
Soo dejisan foobar2000
Waxaa lagu gartaa software interface minimalist Foobar2000 ku jira qaababka badan oo loogu talagalay taageeridda metadata iyo tayada dhalmo codka. Waxa xiiso leh, heerka ugu sareeya sampling, taas oo muujinaysa Foobar2000, ka badato awoodaha ismaqalkii qalabka audio xirfad leh. Si ciyaarta ahayd tayo aad u sarayso, iyo qaabeynta buuq kudiyey.Dulqaad. Intaa waxaa dheer in ay ka halayeen-saddexaad rasmi ah lagu kala sooci karaa, kuwaas oo ka shaqeynayaan xitaa more. Muhimka ah ee ciyaaryahan this taageeri karaan qaabab audio kala duwan, sida Gedo.wuxuu, Musepack, Speex, Opus, iwm waxaa dheer, waxaa suurtagal ah in ay la CD-yada la shaqeeyaan. Intaa waxaa dheer, horumarinta ee la sii daayay a-danab-plugins gaar ah oo ku dar taageerada fudud AC-3.
Ballaarinta u shaqeeya, ee alaabta la isticmaalayo qaybood ayaa u furan
Kartida ay u Customize bandhig ay u playlist a
Furayaasha Hot, user-configurable
Sababtana fasiraad aan Last.fm
Comments on foobar2000:
foobar2000 Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Synthesia 10.2
العربية, English, Українська, Français... EndNote 7.4